ယနေ့ညတွင် စစ်တွေမြို့သို့ ခရီးသွားရာဇဝင်ရှိသည့် ရန်ကုန်မြို့နေသူတစ်ဦး အပါအဝင် ၁၁ ဦး ကိုဗစ် ၁၉ ပိုးတွေ့ရှိ – CharTake
ယနေ့ညတွင် စစ်တွေမြို့သို့ ခရီးသွားရာဇဝင်ရှိသည့် ရန်ကုန်မြို့နေသူတစ်ဦး အပါအဝင် ၁၁ ဦး ကိုဗစ် ၁၉ ပိုးတွေ့ရှိ
ယနေ့ည ၂၄ . ၈ .၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
၂၄ . ၈ . ၂၀၂၀ ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အမျိုးသား ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲမှု ဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၆၅) ခု၊ ဆေးသုတေသနဦး စီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၉၁) ခု၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှု ဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၀) ခု၊
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန ( မော်လမြိုင်) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၇၆) ခုနှင့် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၆) ခု၊ စုစုပေါင်း (၁,၀၆၈) ခုအား ယနေ့၊ ညနေတွင် စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၁၁) ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။
၂၄-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ည (၈ : ၀၀) နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာ (၄၇၄) ဦး ရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာဟောင်း (old confirmed case) များ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာစစ်ဆေးမှု တွင် (၂) ကြိမ်ဆက်တိုက် ပိုးမတွေ့ရှိသူ စုစုပေါင်း (၃၄၁)ဦး ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့အနက် (၃၃၅) ဦး အား ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ သတ်မှတ်နေရာများတွင် အသွားအလာဆက်လက်ကန့်သတ် ၍ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိပါသည်။
ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြု လူနာများအနက် သေဆုံးသူ (၆) ဦး ရှိပါသည်။(၂၃-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီမှ (၂၄ . ၈ . ၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီ အတွင်း တွေ့ရှိရသော စောင့်ကြည့် လူနာအသစ် (၃၁) ဦးရှိပါသည်။ Source ; Ministry of Health and Sports